သင်တန်းသားတွေ ငြိမ်နေလွန်းလို့ ဉာဏ်ဝါဉာဏ်ပြာတွေ သုံးပြီး ဘလော့စာမျက်နှာပေါ်ကို ဗီယက်နမ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ မစ္စတာစတီးဗ်ဂျော့ဘ်စ်တို့ကို ဖိတ်ပြီး အိပ်ငိုက်ပြေအောင် လုပ်လိုက်ရသေး...။ သတင်းဆိုတော့လည်း ဖတ်ကြပေသား။ တစ်ပတ်အတွင်းမှာ ပါဠိသင်ခန်းစာဖတ်တဲ့ သူ (ယောင်ပြီးတော့ ကလစ်မိသူက)တော့ ဒါဇင်နှစ်ခုတောင်ပြည့်ဖို့ မလွယ်..။အော် သတင်းနည်းပညာခေတ်ကြီးပေပဲကိုး..။ ကဲ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သာပါစေ ဟောန္တု မာပါစေ ဟောန္တု အားလုံး မေတ္တာရေဖြန်း လန်းကြစေကြောင်းပါ..။
အဲသလိုလေးများ ပါဠိလို မေတ္တာပို့ကြဖို့ဆိုရင် အာဏတ္တိဝိဘတ်(Imperative Mood)ကို သုံးရပါသတဲ့..။ မြန်မာလို ပြောရရင်တော့ အမိန့်ပေးခိုင်းစေခြင်းကြိယာအမျိုးအစားပါပဲ..။ ဒီကြိယာအမျိုးအစားကို ပါဠိသင်ရိုးမှာ ပဉ္စမီဝိဘတ်လို့ အမည်သတ်မှတ်ထားပါတယ်..။ နေ့တိုင်းဘုရားရှိခိုးမေတ္တာပို့နေကြတဲ့ သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတွေကတော့ ရင်းနှီးနေကြမှာပါ...။ အဟံ အဝေရော ဟောမိ၊ အဗျာပဇ္ဇော ဟောမိ...ကဲဆက်ဆို..မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ
ဒီကြိယာကို အသုံးပြုပြီး ဆုတောင်းတာ(Supplication) ဆုပေးတာ(Blessing) အမိန့်ပေးတာ (Command) အကြံဉာဏ်ပြုတာ(Gentle Advice)နဲ့ ကျိန်စာတိုက်တာ(Curse)တွေကို လုပ်နိုင်ပါသတဲ့...။ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်သာ လုပ်ကြပေရော ။ လက်ထဲသေနတ်လေးရောက်တာနဲ့ သွေးပြောင်းမသွားလေနဲ့... (ဗိုလ်အောင်ဒင်..
ကြိယာပုံစံတွေက လွယ်ပါတယ်..။ ပစ္စုပ္ပုန်ကာလ(Present Tense) နဲ့ နည်းနည်းလေးပဲ ကွဲတာပါ..။
သိ ----------------------------- ထ
အ-သရဆုံး ကြိယာအခြေခံပုဒ်နဲ့ တွဲစပ်ကြည့်ရအောင်၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်လေးပါထည့်ပေးလိုက်ရင် လွယ်သွားမလား ခေါင်းကိုက်သွားမလား..တတ်နိုင်ဘူး...။(မှတ်ရမှာက ဟိ-၀ိဘတ်ရဲ့ ရှေ့မှာ အ(a)သရက အာ(ā)သရပြောင်းနေတာ တွေ့ရမယ်။ ပြီးတော့ အ-သရနဲ့ အာသရဆုံးကြိယာအခြေခံပုဒ်တွေရဲ့ နောက်မှာ အဲဒီ ဟိ-၀ိဘတ်မပါဘဲလည်း သုံးနိုင်တယ်..။)
သော ပစတု (သူချက်ပါစေ) (He may cook.) (May he cook.) (Let him cook)
တေ ပစန္တု (သူတို့ချက်ကြပါစေ) (They may cook)(May they cook.)(Let them cook)
တွံ ပစာဟိ (ပစ) (သင်ချက်ပါ) (You may cook.) (May you cook.) (Let you cook.)
တုမှေ ပစထ (သင်တို့ချက်ကြပါ) (You all may cook)( May you all cook.) (Let you all cook.)
အဟံ ပစာမိ (ငါချက်မည်) (I may cook.) (May I cook.) (Let me cook.)
မယံ ပစာမ (ငါတို့ချက်ကြမည်။) (We may cook.) (May we cook.) (Let us cook.)
ကိဏာတု -----------------ကိဏန္တု (ဒီကြိယာမှာ အာ(ā)-သရက အ(a)သရပြောင်းနေတာတွေ့မယ်)
ဒေသေဟိ -------------------- ဒေသေထ
ဟနာဟိ၊ ဟန------------------------------ ဟနထ
အာဟိ ---------------------------------------- အတ္ထ
အသ္မိ ၊အမှိ ------------------------------------- အသ္မ၊အမှ
ဒီကြိယာနဲ့ တွဲပြီး မသွားနဲ့ (Don't go) မစားနဲ့ (Don't eat) လို့ တားမြစ်ချင်ပြီဆိုရင်တော့ မာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးထည့်သုံးရပါတယ်။ မာ ဂစ္ဆာဟိ(မာ ဂစ္ဆ) ၊ မာ ဘုဉ္ဇာဟိ (မာ ဘုဉ္ဇ) ...
သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းလေးတော့ သည်းခံပြီး လုပ်လိုက်ကြပေဦး...။ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီ ကြိယာတွေနဲ့ တွဲသုံးဖို့ ကြိယာဝိသေသန(Adverbs)လေးတွေ မဖြစ်မနေမှတ်ကြရဦးမှာပါ...။
နေရာဒေသနှင့် ကာလပြကြိယာဝိသေသနများ(Demonstrative Adverbs)
တတော(ထိုနေရာမှ၊ ထိုအရာမှ၊ ထို့ကြောင့်)(from there, from that, therefore)
ယတြ၊ယတ္ထ၊ယဟိံ(အကြင်နေရာ၌)(where, where ever)
ယတော (အကြင်နေရာမှ၊အကြင်အရာမှ၊ အကြင့်ကြောင့်)(from where, from what,wherefore)
ကုတော (ဘယ်နေရာမှ)(from where? From what?)
1. သော ဣဓ ၀သတု။
2. တေ တတ္ထ ဂစ္ဆန္ဆု။
3. တုမှေ ဣဓ မာ နိသီဒထ။
4. မယံ တတော ကိဏာမ။
5. ကုတြ တုမှေ ၀သထ။
6. ယတော တေ အာဂစ္ဆန္တိ၊ အဟံ တတြ ဂစ္ဆိဿာမိ။
7. ယတြ တေ ၀သန္တိ၊ မယံ တတော အာဂစ္ဆာမ။
8. မယံ ဣတော ကုဟိံ ဂစ္ဆိဿာမ။
9. တေ တတြ တနောန္တု။
10. ယတြ တေ ၀သန္တိ။ တတြ တုမှေ ဒေသေထ။
1. သူတို့ ဒီကို လာကြပါစေ။
2. မင်း ဘယ်မှာ နေတာလဲ။
3. မင်း သိပါစေ။
4. မင်း အောင်မြင်ပါစေ။
5. ငါ မင်းရှိရာ လာမယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဆက်နွှယ်မှုပြကြိယာဝိသေသန(Relative Adverbs)တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာ သိနေတယ်..။
ပါဠိမှာ (ယ) နဲ့ (တ) ဆိုတဲ့ စကားလုံးနှစ်လုံးဟာ သိပ်ပြီးတွင်ကျယ်တယ်၊ မြန်မာစကားမှာတော့ အကြင်(ယ) နဲ့ ထို( တ)ပေပဲပေါ့။
''အကြင်အရပ်၌ သူသည် နေ၏။ ထိုအရပ်သို့ ငါသွားအံ့။'' ဆိုတာမျိုးပါ။
''ယတြ သော ၀သတိ၊ တတြအဟံ ဂစ္ဆာမိ၊'' ဖြစ်သွားတာပါ။
အင်္ဂလိပ်လို ရေးပြမှ နားလည်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုပါ
I go there where he lives.
သူနေတဲ့ဆီ ငါသွားမယ် လို့ ပြောချင်တာပါ...။
(ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ သွားဖတ်ရင် အဆင်ပိုပြေမယ် ။ ဘလော့စာမျက်နှာမှာ အနည်းကိန်း အများကိန်းတွေ လိုင်းခွဲရင် ပူးကပ်သွားတော့ေ၀၀ါးသွားနိုင်တယ်..။)
Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 1:51 AM